လူနှစ်မျိုးရှိပါသည် ကိုဘညွန့် (ရေကျော်)၏ အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူနှစ်မျိုးရှိပါသည် ကိုဘညွန့် (ရေကျော်)၏ အမြင်
လူနှစ်မျိုးရှိပါသည် ကိုဘညွန့် (ရေကျော်)၏ အမြင်
- Maung YuGhan SDY
Posted by Maung YuGhan SDY on Jun 26, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
ပထမဦးဆုံး ရေကျော်ရွာရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပါ့မယ် ရေကျော်ရွာဆိုတာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်အပိုင်ရွာကြီးပါ တချိန်တုန်းက အလံနီကွန်မြူနစ်ဗိုလ်ကျော်ဇော(ကျော်ဇောလေး ရင်ဖုံးတောင်စေတီ(သံတွဲမြို့)အနီး အစိုးရတပ်နှင့်တိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံး) ကျက်စားခဲ့တဲ့နေရာပါ စာတတ်ပေတတ်အလွန်ပေါများပြီး ကွန်မြူနစ်လက်စွဲ ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်ကို အရေကျိုသောက်ထားတယ်လို့ပြောရလောက်အောင် စကားကြွယ်ပြီး စာပေနှံစပ်ကြပါတယ် ရွာသားတွေကစည်းလုံးညီညွတ်ကြပြိး နိုင်ငံနဲ့အဝှန်းဖြစ်နေတြဲ့ဿနာမျိုးတွေမှာဆိုရင် အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှု သဘောတရားကိုလက်ကိုင်ထားပြီး ပညာညဏ်ဖြင့်ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ် အလွန်အတုယုဖွယ်ရာ ရွာတစ်ရွာလို့ဆိုရပါမယ်၊
ဒုတိယ ကိုဘညွန့် ကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ် သူကရေကျော်သားပါ ကဗျာရေးစာရေးအလွန်ကောင်းပြီး စာပေဝေဖန်တဲ့နေရာမှာအလွန်တော်ပါတယ် စာလုံးတလုံးသုံးထားတာကအစ သူထောက်ပြဝေဖန်တတ်ပါတယ် သူတပ်မတော်လေမှာ တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးနဲ့အမှုထမ်းစဉ်အခါက မြန်မာစာရေးဆရာအကျော်အမော် ဆွေလှိုင်ဦးနဲ့သူငယ်ချင်းပါအတူတူအမှုထမ်းခဲ့ဘူးပါတယ် ဆွေလှိုင်ဦးရဲ့ရင်သိမ့်တုန်ဆိုပြီး လျှို့ဝှက်သဲဖိုတွေရေးခဲ့သူပါ သူတောင်ကိုဘညွန့်ဆီမှာ ပယ်ပယ်နယ်နယ် အဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ် စကားလည်းအလွန်ကြွယ်တဲ့ကိုဘညွန့်ပါ။
တတိယ လူနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ် တနေ့ကိုဘညွန့်နဲ့ကျွန်တော်စကားထိုင်ပြောနေစဉ် သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူငယ်တယောက်က နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ ရိုင်းရိုင်းပြပြပြောပါတယ် မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူကို ဒီလိုမျိုးရိုင်းရသလားဆိုပြီးဒေါသဖြစ်တော့ သူကစိတ်ထိမ်းပါလို့ပြောပါတယ် ဒါနဲ့သူကလူနှစ်မျိုးကိုပြောပြါတယ်
မင်းကလဲကွာ မင်းကိုလာပြီး စကားပြောတဲ့လူတိုင်းကိုလူလို့မသတ်မှတ်နဲ့ကွ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုခုံးနှစ်ဖက် ခေါင်းထွက်တိုင်းလူမဟုတ်ဘူးကွ သူ့အမူအကျင့်ကိုကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရတယ် လူဆိုတာက လူလိုကျင့်တယ် လူလိုပြောတယ် လူလိုနေတယ် ဒါကိုမင်းအကဲဖြတ်ပေါ့ ဒီလိုအကဲဖြတ်ကွာ လူဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ် တမျိုးက တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့အမူအကျင့်အတိုင်းနေတယ် ဒါကိုလူ့တိရိစ္ဆာန်လို့မှတ် တမျိုးက လူတွေအမူအကျင့်အတိုင်းပြုမှုနေထိုင်တယ် ဒါကိုလူ့သတ္တဝါလို့မှတ် အေး ထပ်ပြီးတော့ခွဲပြမယ် လူ့တိရိစ္ဆာန် လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် တိ ဆိုတဲ့စကားဟာတြိ ဆိုတဲ့ပါဠိအနက်ကဆင်းလာတာ သုံးပေါ့ကွာ အေး သုံးခုသောအရာကိုသိသောသူကို လူ့တိရိစ္ဆာန်လိုံ့ခေါ်တယ် သူတို့သိတဲ့သုံးခုက အိပ်မယ်စားမယ် မေထုန်မှီဝဲမယ် အဲတော့ အိပ်စားကာမ ဤသုံးဝသာသိသောသူဟာ လူ့တိရိစ္ဆာန်ပေါ့ ဒီလိုလိုလူမျိုးမှာ ဘယ်လိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်လို့ရှိမှာ
လူ့သတ္တဝါဆိုတာ ထပ်ရှင်းမယ် သတ္တဆိုတာ ပါဠိအနက်အရခုနှစ်ဂဏန်းကိုဆိုတာ ဒီတော့ ခုနှစ်ခုသောအရာကိုသိသောသူကို လူ့သတ္တဝါလို့ခေါ်တယ် ခုနှစ်ခုသောအရာဆိုတာက ဘုရားရှင်ပြောတဲ့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါး (၁)သဒ္ဓာ =ယုံကြည်ခြင်း (ရတနာသုံးပါးတို့အားယုံကြည်ခြင်း) (၂)သီလ =အကျင့်ကောင်းခြင်း(ငါးပါးသီလ ခုနှစ်ပါးသီလ ဆယ်ပါးသီလတို့ဆောက်တည်ခြင်း) (၃)သုတ =အကြားအမြင်များခြင်း (၄)စာဂ =ပေးကမ်းစွန့ကြဲလှူတန်းခြင်း (၅)ပညာ =အသိညဏ်ရှိခြင်း (၆)ဟီရိ =မကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်ရှက်ခြင်း (၇)ဩတ္တပ္ပ =မကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်ကြောက်ခြင်း ဒါပေါ့ကွာ လူတွေဟာ ဒီတရားတွေကိုသာ တန်ဘိုးထားပြီးကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ပဋိပက္ခဆိုတာဘယ်ရှိတော့မှာလဲငါ့လူရာ အဲဒိတော့မောင်မင်းလဲကိုယ်ကြိုက်ရာရွေးပေါ့ ရွေးခွင့်ရှိတာပေါ့ဟုဆိုကာ နဂိုကမှာခေါပြီးအပြင်ထွက်နေသော သူ၏သွားများကိုအစွန်းကုန်ဖေါ်ပြီးတဟားဟားနှင့်ရေပါတော့သည်၊
*ကိုဘညွန့်သည် 1995ခုနှစ်ခန့်က စစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှလွတ်ရက်စေ့လွတ်ပြီး နှစ်နှစ်ခန့်အကြာ ကွယ်လွန်သွားသည်ဟုသိရပါသည် ကောင်းရာသုဂတိသို့ရောက်ပါစေ ဘဝအဆက်ဆက် အေးချမ်းပါစေ*
About Maung YuGhan SDY
Maung YuGhan SDY has written 13 post in this Website..
View all posts by Maung YuGhan SDY →
ရေကျော်ရွာ သင်္ကြန်ကတော့ စည်ကားသဗျာ။
ကို myanmarcitizen သက်သေဘဲဗျို ့။
လူတော့ လူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူထဲမှာ..
ဖိုးကြက်တောင် ပြောသလို…. စားဖို့..အိပ်ဖို့.. ကာမခံစားဖို့.. လောက်တာသိတဲ့လူကို “လူ့တိရိစ္ဆာန်”
လူတော့ လူပဲ.. ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း ဒေါသတွေ အားကြီးပြီး ဆူပူနေသူဟာ “ လူ့ငရဲသား”
လူတော့လူပဲ.. ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေသူဟာ “လူ့အသူရကာယ်” အသူရကာယ်။ အသူရကာယ… (ရဲရင့်မှု မရှိသောသူ)လို့ဆိုပါတယ်။
လူတော့လူပါပဲ..ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း လိုနေတဲ့သူ… ဟင်း ၁၀=ခွက်ရှိရင် အခွက်၂၀-လိုချင်သူ..လိုအပ်လို့ လိုချင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ… လိုချင်လို့ကို လိုနေသူဟာ အမြဲငတ်နေလို့ “လူ့ပြိတ္တာ”လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဘာမှ မသိတဲ့ လူ့တိရိစ္ဆာန်။ (မောဟကြီးသူ)
အမြဲပူလောင်နေတဲ့ လူ့ငရဲသား။ (ဒေါသတွေကြီးနေသူ)
အမြဲ လိုနေသူ ရှိတာနဲ့ မပြည့်စုံတဲ့ လူ့ပြိတ္တာ။ (လောဘတွေကြီးနေသူ)
အဲဒီလို လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေကနေလွတ်နေတဲ့ လူသားစစ်စစ်လေးတစ်ဦးရဖို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှာကြည့်စမ်းပါ။
ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့ … လူ့အဖြစ်ရခဲတယ်။ လူဆိုတာ.. မနုဿ.. အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးသိသူတဲ့။
လူ့အဖြစ်ရဖို့ ဘယ်လောက်တောင် ခဲယဉ်းသလဲဆိုရင် ဥပမာတွေကို အများကြီးပဲ။
ဖိုးကြက်တောင် ခုလိုတင်ပြလို့ ကျွန်တော်လဲ တင်ပြခွင့်ရလိုက်တာ ဖိုးကြက်တောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…
လူတွေတင်တဲ့ ပို(စ့်)တွေနဲ့ လူမဟုတ်တဲ့လူတွေ တင်တဲ့ ပို(စ့်)တွေ ဖတ်ရင်ကို ခွဲခြားရပါတယ်ဗျာ။
မဟုတ်တာတွေဖတ်မိရင် ဒေါသကထွက်လာလွန်းလို့ ပြောမိရော။
အဲတော့ ကျွန်တော်ပါရောယောင်ပြီး လူမဟုတ်တော့ဘူး။ အဟီးးးးးးးးး
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကြားလူမျိုးထဲမှာပါမယ်ထင်တယ် အဲဒီလူမျိုးနှစ်မျိုးစလုံးမှာမပါတာတော့သေချာတယ် အကုန်လုံးလဲမစောင်ထိန်နိုင်ဘူးဒီတော့ကြားနေလူမျိုးဘဲလုပ်မယ်
မနုဿတ္တဘာ ဒုလ္လဘ = လူ့ဘဝရခဲခြင်း
မဓ္ဓာန ဇီဝိတ ဒုလ္လဘ = အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရခဲခြင်း
သဒ္ဓမသာဝန ဒုလ္လဘ =သူတော်ကောင်းတရားကြားနာခွင့်ရခြင်း
ဗုဒ္ဓါန ဥပ္ပါဒ ဒုလ္လဘ =ဘုရားပွင့်ထွန်းဘို့ရခဲခြင်း
ဤရခဲလှသော လူ့ဘဝလေးတွင် ရှင်သန်ခွင့်ရခိုက် သူတော်ကောင်းတို့တရားကို နာကြားရခါ ဘုရားအားသိခြင်း တရားအားသိခြင်း သံဃာတော်တို့အား သိခြင်းဖြင့် ဖိုးကြက်တောင်နေထိုင်ရာ ဤသတ္တလောကကြီး တွင် ဖိုးကြက်တောင်၏ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ လုံးတွင် မကောင်းသော အကျင့်မကောင်းသောစိတ် ကင်းကွာပြီး ကောင်းမှုများသာ လုပ်နိုင်ပါစေ
မနုဿတ္တဘာ ဒုလ္လဘ = လူ့ဘဝရခဲခြင်း ( ယခုနှစ်တွင်ပင်… ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း၇၀၀ဝ ပြည့်သွားခြင်း)
မဓ္ဓာန ဇီဝိတ ဒုလ္လဘ = အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရခဲခြင်း (သက္ကရာဇ် ၂၀၂ရတွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း၈၀၀ဝ ပြည့်မည်ဖြစ်ခြင်း)
သဒ္ဓမသာဝန ဒုလ္လဘ =သူတော်ကောင်းတရားကြားနာခွင့်ရခြင်း ( World Telecommunication/ICT မှာ.. ယခင်နှစ်၁၀ဝကထက်မမျှော်မှန်းနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်လာပြီး.. ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းမှ လူတယောက်စကားကို.. ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းမှလူက.. ရုပ်သံဖြင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်မြင်နိုင်ခြင်း)
ဗုဒ္ဓါန ဥပ္ပါဒ ဒုလ္လဘ =ဘုရားပွင့်ထွန်းဘို့ရခဲခြင်း ( )
ကိုယ်တော်ဇောက်ထိုးပြောတဲ့..” လူတော့ လူပါပဲ”တွေမပါ…
သဂျီးက အစအနောက်တော်တော်သန်တာဘဲနှော် သဂျီးရေ ရှင်သန်ခွင့်ရကြပေမယ့် လက်သည်တွေအနှိပ်ကြမ်းလို့ လူမသိသူမသိ အသက်ရှင်သန်ခွင့်မရသူတွေ အစစ အစစ သောအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့် လူ့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ ဆုတောင်းပေးဘို့ လူသားတာဝန်လေးတော့ ရှိရမှာပေါ့ သဂျီးရာ
အိပ် စား ကာမ
အနော်က လူ့မလိုင် အဟိ
ကိုဘညွန့်သည် 1995ခုနှစ်ခန့်က စစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှလွတ်ရက်စေ့လွတ်ပြီး နှစ်နှစ်ခန့်အကြာ ကွယ်လွန်သွားသည်ဟုသိရပါသည်
ဘာလို့ ထောင်ကျသွားလဲ သိရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။
ကဲ ကိုကြက်တောင်ရေ. ရေကျော်ရွာသား၊ရယ်လျှင်သွားပေါ်အောင်ရယ်တတ်သူ
တစ်ယောက် ထောင်ဘာကြောင့်ကျသလဲ ရှင်းပြပါ။ကျနော်လဲ သိထားတာလေးတွေနဲ ့